PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-06 - Owe-OPW uncengela uzakwabo ohlelweni
Owe-OPW uncengela uzakwabo ohlelweni
Isolezwe ngeSonto - 2019-01-06 - IZINDABA - S’MANGELE ZUMA
UMETHULI wohlelo lakuMzansi Magic, i- Our Perfect Wedding uNomsa Buthelezi, unxuse ababukeli balolu hlelo ukuthi banikeze ithuba uzakwabo omusha uVele Manenje.
UVele uqale ukuvela kulolu hlelo ngeSonto eledlule okuthuse abantu abaningi njengoba bebezitshela ukuthi ungene esikhaleni sikaNomsa.
Ekhuluma neSolezwe ngeSonto uNomsa, uthe lolu hlelo ngeke ulwethule uwedwa ngisho usuthanda ngenxa yobuningi bemishado.
Uvumile ukuthi egcina ukuvela kulolu hlelo wavalelisa kubabukeli kodwa, wathi into ajwayele ukuyenza njalo uma eseqede iziqephu zakhe ezingu-13.
Ebuzwa ngokuthi usazophinde abonakale kulolu hlelo, akafunanga ukucacisa wathi kodwa ngothando lwababukeli usangabuye abonakale.
Uthe kumjabulisile ukuqokwa kukaVele ngoba kuveze ukuthi abeMzansi Magic banikeza izidudla ithuba lokuba ngabethuli bezinhlelo obekuyinto engajwayelekile.
“Kusukela evelile uVele ngifonelwe abantu abaningi abanye bengithumelela imiyalezo ezinkundleni zokuxhumana, bezwakalisa ukudumala ngokungangiboni. Abanye bakhala ngokuthi uVele isidudla, ungusomahlaya, babona engathi uzovala isikhala sami. Akunjalo lolu hlelo luqoshwa ngabethuli ababili. Umethuli emunye uqopha iziqephu ezingu-13 zidlale zilandelana uma seziphelile kudlale ezomunye umethuli. Miningi kakhulu imishado ngeke usebenze uwedwa,” kusho uNomsa.
Uthe uVele ubethukile eqala lo msebenzi kodwa wamcathulisa, wameluleka nokuthi angazami ukuzenza yena.
“Ngimtshelile ukuthi abantu basazomnaphaza bemqhathanisa nami. Into engiyithanda ngaye ungumuntu ozithobile, ozimisele ngokufunda lo msebenzi. Ngimtshelile ukuthi basazomgxeka bethi mkhulu, basho konke abakuthandayo kodwa kumele akhumbule ukuthi kunesizathu sokuthi kukhethwe yena. Abantu abamnikeze ithuba, bamsize ukuthi akhule aqhakaze kulo hlelo njengoba benza nakumina,” kusho uNomsa.
Uthe yena kuyamsiza ukuzehlisa nokusebenza kanzima ngoba nabanye osaziwayo ababembukela phansi sebegcine sebemhlonipha ngokubona amagalelo akhe. Okhulumema iMzansi Magic, uBongi PotelwaMetsing, uthe isikhathi sikaVele manje njengoba beshintshashintsha abethuli njalo ngemuva kweziqephu ezingu-13. Uthe uma bembuyisa uNomsa bazomemezela akukho okuqinisekisiwe okwamanje.
Echaza ngoKayise Ngqula uthe wayewine i-season eyodwa kodwa bamnikeza angaphezulu.
UMETHULI omusha we- Our Perfect Wedding uVele Manenje Isithombe: VELE MANENJE/ INSTAGRAM